Ducada Shaqada. ? Hel, Hel oo laguugu yeedho
10 Akhriska Min
Tukashada shaqada Waxaan gaari karnaa faa iidooyin badan.
Tukashadu waa istaraatiijiyad ruuxi ah oo naga caawisa sidii aan u heli lahayn xalka dhibaatooyinka aan badanaa aqaano waxa aan sameyno ama sida aan wax u falno.
Weedhan khaaska ah waxaan isweydiin karnaa nafteena, si jawiga shaqada uu u fiicanyahay, u weydiisto maamulayaasha ama maamuleyaasha iyo codsiyada kale oo dheeraad ah oo kuxiran duruufaha kaladuwan ee ka soo bixi kara deegaankaas.
Muhiimadu waxay tahay in la ogaado in arrimaha shaqada sidoo kale ay jiraan salaadda in si gaar ah iyo si toos ah loo samayn karo, markasta oo la xasuusto in salaadu tahay ficil iimaan leh oo ay tahay in la sameeyo iyada oo la rumeysan yahay awooda ay leedahay.
1 Salaadda shaqada Ma xoog baa?
1.1 Salaadda si aad shaqo u hesho
1.2 Tukashada si loo duceeyo shaqada
1.3 Ducada inaad shaqo ku hesho 3 maalmood gudahood
1.4 Si aad u codsato shaqo deg deg ah
1.5 In aad iigu yeedho shaqo
Salaadda shaqada Ma xoog baa?
Salaad kasta waa mid awood leh. Tan darteed, waa ku filan in lagu caabudo rumaysad.
Haddii aad leedahay iimaan badan oo aadna u maleynayso in wax waliba si hagaagsan ay u socdaan, way shaqeyn doontaa.
Rumayso Ilaahay Waxay ku kortaa awoodaheeda. Kaliya markaa wax baad sax u siin doontaa.
Waqti badan ha luminin, bilaw ducada hada!
Salaadda si aad shaqo u hesho
Ciise, aabaha jannada daa'imka ah:
Aabbahay, Hagahayga, xooggayga, waxaan kula hadlayaa Badbaadiyehayga ...
Waxaad haysataa wiilkaagii halkan dembaabay, laakiin kan ku jecel ...
Adigu waad ku ammaantay jacaylkaaga, raxmaddaada daa'imiska ah iyo nabadgelyada aad na siisay, Aabe.
Taasi adiga ayay kuu tahay, wax walba waa suurogal iyo wax walba oo aad awoodid maxaa yeelay nimcadaadu waa weyn tahay weligana igama tagi doontid. Oo wakhti aad u dhibaataysanna iima gacangelin gacmahayga.
Waxaad tahay kibis, waxaad ahaayeen nolosha, waxaad tahay jacayl iyo raaxo. Gudcurkaaga gudcurka ku dhex jira. Waan kuu imid anigoo jilbaya, Aabbahay gacaliyahayga, waxaan u imid mar kale inaan kuu duceeyo wanaaggaaga daa'imka ah, iyo badbaadintaada.
Maxaa yeelay, waxaan ogahay in gacantaada ka cabsan maayo, oo waxba kama baahan doono. Maxaa yeelay, adigu Sayidow, wanaagow, waxaad caawisaa kuwa camalka badan.
Waxaan kaa baryayaa inaad ka walwasho welwelkayga, waxaan kaa baryayaa in codsigayga la jawaabo. Xakamee xanuunkayga iyo culayskayga.
Aabe, gacaliyahayga Ciise ayaa sara kiciyay, fiiri baahiyadayda oo iga caawi inaan taageero iyaga. Waxaan kaa baryayaa shaqo cusub, Aabbahay.
Sababta oo ah waan ogahay in qorshayaashaagu yihiin kuwo hagaagsan, maxaa yeelay waxaan dareemayaa xariir. Waxaan kuugu imid inaan codsigayga shaqo sameeyo. Waxaan u baahanahay shaqadaas si aan u taageero qoyskayga.
Waan ogahay adiga inaad wanaag wanaagaaga ah noogu oggolaan doonin inaan ku dhaco gacantaada sababtoo ah kama baqayo waana dareemi doonaa xasil. Waan ku baryayaaye, Aabbow, in dhaqsiyo laygu siiyo.
Aabe barakeysan iyo jannada. Waan ogahay inaad furi doonaan albaabbo iyo daaqado rajo. Waan ogahay in naxariistaada weyn ee aad shaqo wacan iga heli doonto.
Eebow iga caawi samir, dulqaad iyo abaalmarin. Ka dhig isaga inuu haysto shaqo hufan, barwaaqo iyo xasilloon. Soo dhexgashaa codsigeyga si aan dhaqaale ahaan isu dhiso.
Ii samee Bixiye oo barakee qoyskayga, cuntadayda.
Waxaan kaa baryayaa inaad ka shaqayso ama aad bilowdo meheraddayda.
(Si aamus ah u codso dalabkaaga)
Ii caawi Sayidkayga culayskayga, waan ku baryayaaye, Sayidow.
Waxaan aaminsanahay waxkasta oo kugu jira, Ilaahayow.
Sayidow, weligaaba ammaani.
Baryadaan si aad shaqo u hesho waa mid aad u awood badan!
Dhibaatada shaqaaluhu waxay ku fidday magaalooyin badan oo adduunka ah. Si kastaba ha noqotee kiiskan gaarka ah waxaa jira xukun gaar ah.
Dareenkan, waxa ugu taliyo ayaa ah in si toos ah iyo daacad ah loo weydiiyo waxa aan rabno inaan aragno, howsha aan rabno inaan helno oo aan weydiisano inaan rumeysanno.
Ma jiro salaad laga sameeyo qalbiga oo aan nafteenna ka buuxinin tamar wanaagsan isla markaana tamar isku mid ah ayaa ah waxaan u gudbinayno meel kastoo aan tagno.
Salaadda xoogga leh waxay jebin kartaa silsilado aan macquul aheyn in looga adkaado xoogagga jirkeenna.
Tukashada si loo duceeyo shaqada
Sayidow, waan kugu mahad naqayaa, maxaa yeelay waan shaqaysan karaa.
U ducee shaqadayda iyo kuwa ila shaqeeyaba.
Naga sii nimco si aan kaagala kulanno shaqada maalinlaha ah.
Naga caawi inaan noqono u adeegaya dadka kale daallan. Naga caawi inaan shaqadeenna ka dhigno salaad.
Naga caawi inaan ogaano goobta shaqada suurtagalnimada dhisitaanka adduun ka wanaagsan.
Sayidow, sida keliya ee baabi'in kara harraaddeenna caddaaladda, na sii nimcada si aan nafteenna uga xorowno wax kasta oo aan waxtar lahayn oo aan is-hoosaysiinno.
Sayidow, waan kugu mahad naqayaa, maxaa yeelay waan shaqaysan karaa. Ha u ogolaanin reerkeyga inaysan helin taageero iyo in guri kasta marwalba ay jiraan waxa lagama maarmaan u ah in lagu noolaado si sharaf leh.
Salaadaha loo sameeyo ujeedada barakada nolosheena ama nolosha kuwa hareeraheena ah waxay u muuqdaan inay yihiin codsiyada ugu daacadsan ee la sameyn karo.
Markii aan weydiisanno kuwa kale waxaan muujineynaa qalbiga wanaagsan ee Eebbe ina siiyay.
Tani waa sababta aan u duceyno in la barakeeyo shaqada Salaad uma aha faa iidooyinkeena laakiin wanaaga dhammaan kuwa nala wadaagaya jawiga shaqada.
Jumladdan waxaad waydiin kartaa xaaladahaas oo jawiga shaqada ay kuxiran yihiin tabar daran iyo fikrado qaldan.
Ducada inaad shaqo ku hesho 3 maalmood gudahood
Ciise, Ciise wanaagsanow, Ciise gacaliyahayga, Sayidkayga, Adhijirradayda, Badbaadiyahayga, Ilaahay, waan kuu caabudaa adiga oo ah wiilka aabbaha daa'imka ah, waan kugu kalsoonahay waanan kugu ammaanayaa naxariis iyo wanaag, waxaan kugu xushmeeyaa maxaa yeelay waxaad na siiso nabadgelyo iyo adiga Waxba kama baqayo, waan ku jeclahay maxaa yeelay waxaad igu darsataa raallinimo iyo nimco jannada markasta oo aan murugadayda kugu hor yimaado, markasta oo aan caawimaad kuu weydisto.
Ciise, Ciise wanaagsanow, Ciise gacaliyahaygayow, kuwi nuurka Iftiinka daa'imka ah gacmahayga dib u fidiyo mar kale, oo ii kaalay i caawi markii aan dhibaataysnahay; Adiga oo ah walaalkaa saaxiibkaa ah oo aad saaxiibkaa ah oo aadan waligaa keligaa nooga tagin si aynaan u qaldamin, adiga oo had iyo goorba dhinac taagan, ii naxariiso oo i caawi dhibaatada iyo dhibaatooyinkayga, oo ii naxariiso oo iga bixi dhibkayga, Isaga oo ah dhexdhexaadiye gaar ah oo u dhexeeya Ilaah iyo dadka, wuxuu hortiisa ku bixinayaa codsigeyga si aan uga qeyb galo.
Ciise, Ciise wanaagsanow, Ciise gacaliyahaygayow, fiiri baahida weyn ee aan haatan qabo: raadinta shaqadeyda waxaan ku arkaa mid taag-qaba, in kastoo aan isku dayo ma heli karo waxaanan si deg deg ah ugu baahanahay sababtoo ah baahiyadeyda ayaa xad dhaaf ah oo quus ah, Waxaan kaa baryayaa inaad i siiso gargaarkaaga jacaylka ah.
Ciise, Ciise wanaagsanow, gacaliye Ciisow, wuxuu furayaa dhammaan albaabbada aan ku xirnaa, waxay iga caawiyaan inaan helo shaqo wanaagsan ama ganacsi i siiya xasillooni dhaqaale oo i siiya fursado aan ku horumaro oo aan horay ugu socdo, shaqo hufan ama barwaaqo ama ganacsi meesha Waxaan yeelan karaa kobcin xirfadeed iyo shaqsiyeed.
Ciise, Ciise wanaagsanow, Ciise gacaliyahayga, Adiga oo nafta iyo jidhka ku buuxiya xasillooni, yareyso raaxo-darrooyinka aan dareemayo ee iga dhex jira, i sii daa daqiiqaddaan xun ee ha i sii daynin inaan qoto dheer oo qoto dheer.
Saacaddaan rajo la’aanta iyo rajo beelida ayaa igu hagaya tillaabooyinka aan qaadayo, waxay iga dhigayaan in aan helo shaqooyin wanaagsan, dhammaan albaabbada ii fur oo dadkeyga daacadda ah jidkeyga ku bixiya oo taageeradooda; Waxaad i siisaa xigmad si aan u muujiyo kartideyda iyo samirkayga iyo adkeysiga aanan ka quusan.
Iga caawi inaan helo shaqo wanaagsan oo aan hawlahayga si guul leh ugu gudan karo oo aan ku heli karo lacagta sida xun loogu baahan yahay gurigeyga, ii soo dir ciiseyda wanaagsan ee Barakadaada si aan u helo waxa aan u baahanahay:
(ku dheh iimaan weyn waxaad rabto inaad hesho)
Ciise, ciise wanaagsan, gacaliye ciise, waxaan kugu mahadinayaa salka hoose ee ahaanshaheyga dhamaan faa iidooyinka aad i siisay iyo kuwa soo socda oo aan hubaa inaanan la waayi doonin, dhamaantiin waxaan ahay adiga waxaanan rajeynayaa inaan weligiis jannada kujiro , halkaas oo aan rajeynayo inaan kugu mahadnaqo weligiis iyo weligiis oo waligiina kaaama soocna.
Sidaas noqo. Aamiin
Ma jeceshahay ducada inay shaqo hesho 3 maalmood gudahood?
Marar badan waxaan baranaa inay jirto shaqo laga heli karo meel aan rabno inaan ka shaqeyno laakiin aan macquul aheyn suurtagal ahaan inaan awoodno inaan galno shaqadaas.
Xaaladahan waxba kama wanaagsana salaadda maxaa yeelay iyadu waa warqaddeena ugu fiican ee hordhaca.
Markaad gasho wareysiga shaqada waxaan weydiisan karnaa Ilaaha weyn ee abuuray Abuuraha cirka iyo dhulka inuu nimco naga siiyo si aan aragti fiican u yeelanno.
Dhanka kale waa inaan had iyo jeer weydiinaa in mararka qaar waxa aan rabno aysan aheyn waxa uu Rabbi inaga doonayo, macnahaasna waa inaan si aad ah uga feejignaano inaan sameyno waxa uun doonista Eebbe.
Aynu u gudubno xukun shaqo kale.
Si aad u codsato shaqo deg deg ah
Ilaah waa loo shaqeeyaha ugu weyn adduunka.
Waxaan aaminsanahay badnaantiisa iyo in uu i siin doono shaqadii ugu fiicneyd ee uu ilaa iyo hadda qabtay.
Shaqo aan ku farxi doono.
Waxaan barwaaqaysan doonaa, maxaa yeelay waxaan heli doonaa fursado badan oo aan kor ugu kaco. Shaqo halka bay'adda shaqadu ku fiicantahay.
Shaqo ay maamulayaashayadu ilaah ka cabsanayaan oo ay siiyaan jawi diiran oo cadaalad ah shaqaalahooda.
Sababtaas awgeed, muddo dheer ayaan ku sii jirayaa shaqadaas waxaanan dareemi doonaa farxad inaan ka shaqeeyo halka uu Ilaahay iigu hayo alaabooyin fara badan, anigoo wax walba waafajinaya. dunida.
Mahadnaq, had iyo jeer waan ku farxi doonaa, oo la wadaaga farxadaha Rabbiga oo dhan, anoo aamusnaan ku baraya is-hoosaysiinta iyo tusaale ahaan, adkeysi, daacadnimo, deganaan, mas'uuliyad iyo inaan maalin walba siiyo farxad badan, sida ugu fiican, sidaa daraadeed waxa aan ku sameeyo jacayl, waa danta dad badan.
Aamiin, Waad ku mahadsan tahay Aabbaha inaad i maqashay oo tan la dhammeeyey
Imaanshaha meel aysan xitaa ka raadinayn shaqaale iyo dalbashada shaqada waxay noqon kartaa talaabo u baahan geesinimo sarre maadaama ay jirto fursad fiican oo naloo diidi doono annaga oo aan xitaa tusin xirfadaheena oo dhan.
La duco inaad shaqo weydiisato Degdega ah wuxuu naga caawin karaa inaan ka gudubno imtixaanka ugu horeeya ee shaqo dalbashada si iskood ah oo aan ahayn sababtoo ah waxaan aragnay xayeysiin.
Waqtiga codsashada shaqo, caawimaad xagga ruuxiga ah ayaa la weydiisanayaa inuu ogaado halka aan aadayo, sidaa darteed waa Ilaah inuu tilmaamo talaabooyinkeena laga bilaabo waqtiga aan guriga ka baxno iyo ilaa aan dib ugu laaban karno.
In aad iigu yeedho shaqo
Aabaha jannada ku jeclahay, Magaca Ciise, waxaan raadsadaa xigmaddaada iyo aaminaaddaada si aad iigu tilmaamto shaqada aan aniga u wanaagsan.
Waxaan rabaa hadda in aan ku socdo naxariistaada iyo runtaada oo aanan u sujuudin damacyadayda iyo fahamka aan rasmiga ahay.
Iga caawi inaan helo shaqo wanaagsan oo gacanteyda ku jirta, oo aan waxba igaga maqnayn aniga iyo wax kastoo aan leeyahayba.
Wax walboo kama walwali doono ama kama walwali doono, Aabe, maxaa yeelay waxaan dareemayaa nabadaada inay ku soo socoto qalbigayga iyo maskaxdeyda.
Waxaad tahay isha aan kahelo biyaha nool, waxaan ku kalsoonahay waxqabadkaaga iyo inaad isiiso ciidanka si aan uga hor tago kor u kaca iyo hoos u dhaca noloshayda maalinba maalinta ka dambaysa.
Waan kugu mahad naqayaa, Aabahay, sidaad u fidisay baahida aan u qabay sida ay tahay hodantinimadaada iyo ammaanta Rabbigeenna.
Oh Ilaahayow, xooggaaga ha la jiro maanta si aan shaqo u helo. Igu horseedi howsha aan ku jeclahay oo aan ku qiimeeyo naftayda oo dhan.
Igu hagaaji jawi leh ixtiraam iyo iskaashi, jawi aamin ah oo farxad leh.
Igu caawi inaan helo isku dheelitirka maskaxda iyo tan ruuxiga ah shaqadan cusub ee aad ii haysay. Waad ku mahadsan tahay Sayidow, inaad dhageystey oo i caawisay maanta.
Noloshu markasta ma fududaan, laakiin waxaan ku dadaalayaa inaan xasuusto inaad had iyo jeer u joogan inaad i caawiso wakhti kasta oo noloshayda ah.
Mahad waxaa leh Sayid, Mahad ha lahaado magacaaga quduuska ah Aamiin.
Waqtigaas aan horey uga tagnay dukumiintiyadeena shirkada qaar, waa inaan ku laabano guriga anigoo sugaya in wicitaan la sameeyo waqtiga ugu gaaban ee macquul ah, sababtoo ah tijaabadeena ugu weyn ee arintaan waa inaan sugnaa rajo la'aan.
Sabirku waa furaha hawshan sugitaan.
Si kastaba ha noqotee, waa inaanan waligeen sugin, waxay codsanayaan laba inay u dhaqaaqaan qaybaha si aan ugu dadaalno si wicitaanka wanaagsan ee aan sugeynaa uu u yimaado sida ugu dhaqsaha badan.
Waxaad dhihi kartaa 5 jumladaha dhib la'aan.
Waxa muhiimka ah waa in la helo iimaan inta lagu gudajiro ducada. Wax intaa ka badan ma jiraan.